1.How si meesha looga saaro qalab macruufka ah ee ka iCloud iyo Hel liiska iPhone aan
2.How si meesha looga saaro qalab macruufka ah ee ka iCloud iyo Raadi aan iPhone la iCloud
Marka taa loo eego sifooyinka wanaagsan oo u leeyahay in ay bixiyaan iyo nooca ammaanka oo aad ku raaxaysan karaan, waxaa jira wax badan oo ka mid ah dadka isticmaala oo lagu go'aansaday for the 'heli my iPhone' app. Marka aad qabtid app this gagadin, aad iPhone noqon doona hawshooda u iCloud qufulan.
Ilaa iyo haddii aad soo gashid aad aqoonsiga iCloud, waxaad ma awoodi doonaan in ay isticmaalaan qalab aad. Tani waa feature aad u fiican si looga hortago khasaaro xogta xatooyo ama misplacing aad telefoon ku kor. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad raadinayso siyaabo by kaas oo aad ka saari kartaa qalab macruufka ka iCloud iyo 'heli my iPhone', markaas ayaan ka hadli doonaa siyaabaha kala duwan oo aad samayn kartaa.
Qaybta 1aad Sidee inuu ka saaro qalab macruufka ah ee ka iCloud iyo Hel liiska iPhone aan
Markii aad raadinayso in laga takhaluso qalab Apple ama xitaa sababo kale, haddii aad rabto in meesha laga saaro qalab aad iyadoo la kaashanayo 'heli my iPhone', halkan waa tallaabooyinka aad u baahan tahay in la raaco.
Soo saarida qalab aad ka hel My iPhone
Qaado qalab Apple oo taga si ikhtiyaar goobaha ay ku qalab aad.
Hadda hoos liiska guji iCloud.
In liiska, garaac "heli my iPhone '.
Hadda, waxaad si fudud u toggle karaa 'heli my iPhone' doorasho si aad u dami.
Waxaad heli doontaa inuu soo galo id Apple iyo password u keeno isbedelka.
Marka raadinayso in aad ka saarto aad MAC, waxaad kala socon kartaa tallaabooyinka.
• Launch 'heli my iPhone' ka dibna riix 'doorbidida nidaamka'.
• Hadda, in fursadaha, guji iCloud
• In liiska soo socda, uncheck ikhtiyaarka, iyo 'Raadi aan Mac'.
• Waxaad heli doontaa inuu soo galo admin password u Mac in ay samayso bedelka.
Part 2 Sidee inuu ka saaro qalab macruufka ah ee ka iCloud iyo Raadi aan iPhone la iCloud
• gal icloud.com/find iyo geli aqoonsiga login Apple
• Waxaad la gooyo doonaa in interface internetka ee 'heli my iPhone'
• Waxaad arki kartaa liiska qalabka Apple oo dhan.
• Waxaad riixi kartaa 'qalabka oo dhan iyo waxa aad ku tusi doonaa liis dhamaystiran oo qalabka tufaax oo dhan
• dhaqaaq badan in qalabka oo aad rabto in aad ka saarto oo guji ku yaal.
• Riix "kaxeeyo account '.
• Sidoo kale, sidoo kale waxaad riixi kartaa batoonka delete oo jooga dhanka ah qalabka noqon doonaa.
Marka raadinayso in aad tirtirto qalab Apple xisaabtaada iCloud, si fudud raac tallaabooyinkan fudud.
Gudaha gal in aad xisaabta iCloud adiga oo isticmaaleya isticmaale aqoonsiga id Apple
Riix ikhtiyaarka qalabka iyo sugaan illaa codsiyada syncs waxa ku jira qalab aad nidaamka.
Haddaba, xulo qalab ah oo aad dooneyso in aad ka saarto iyo riix qaybta 'tirtirto' taas oo jooga ag magaca qalabka.
Qalabka waxaa laga tirayaa aad server iCloud. Waxaa lagula talinayaa in ay xitaa noqon ah 'heli my iPhone' muujinta sida aan u samayn kari la moodo telefoonka ku noolyihiin ruuxii soo socda isticmaalaa.
> Resource > iCloud > Sida loo iCloud ka saar Device macruufka iyo Raadi My iPhone